EBEE IBUDATA VORBISFILE.DLL NA OTU ESI ETINYE YA - ISIOKWU - 2019
Ụzọ ọjọọ na-edozi njehie bụ ịchọ ebe ị ga-ebudata vorbisfile.dll maka n'efu maka GTA SA, ma ọ bụ chọọ iyi ya, budata faịlụ a site na nchịkọta DLL a na-enyo enyo, wee chọpụta ebe ị ga-etinye ma ọ bụ tụba faịlụ a. Nke a nwere ike ịdị ize ndụ (mgbe niile, ị maghị ihe ị na-ebudata) ma ghara iduga nchịkọta chọrọ, egwuregwu ahụ agaghị amalite. Ma ugbu a ụzọ dị mma.
Kedu vorbisfile.dll na ebe ibudata ya n'ụzọ ziri ezi
Ụdị njehie na ederede "mmalite nke usoro ihe omume agaghị ekwe omume" na ihe na-egosi faịlụ nke na-efu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Windows anaghị enwe ihe ọ bụla dị mkpa maka ọrụ nke usoro ihe omume ahụ. Na, dịka iwu, mpaghara a nwere ihe karịrị otu ọbá akwụkwọ, ya bụ. ọ bụrụ na ịchọta ebe ibudata vorbisfile.dll na ebe ị ga-atụfu ya, ọ nwere ike ịpụta na GTA San Andreas agaghị amalite.
Ụzọ ziri ezi bụ ịchọpụta ụdị faịlụ ọ bụ na ibudata usoro ihe odide nke nwere faịlụ a.
Lee m ga - enyere aka: vorbisfile.dll bụ Ogg Vorbis codec, nke pụtara na ị nwere ike ibudata ya n'efu site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị //www.vorbis.com, ebe usoro mmemme na-etinye ya na ya.
Ịkwesighi iji dll "faịlụ" site na saịtị dị iche iche, adịghị edekọ faịlụ nke nwere ya na System32 ma denye ọbá akwụkwọ ahụ na-eji "regsvr32 vorbisfile.dll", na ọbụna wụnye usoro mmemme "njehie njehie DLL" (nke ihe na-anọchite anya ya abụghị ihe ekwuru na nkọwa ahụ).
Rịba ama: ọ bụrụ na ọ bụrụ na echichi egwuregwu ahụ amaliteghi, gbalịa na-ebugharị faịlụ vorbisfile.dll na ogg.dll, dị na folda ya na GTA, gaa ebe ọzọ.
Ụzọ ọzọ iji wụnye vorbisfile.dll
Dị ka e kwuru na n'elu, faịlụ a bụ codec maka egwu na ụdị usoro na, na mgbakwunye na nbudata site na koodu codc ukara, ịnwere ike iwunye set nke codecs nwere ya (maọbụ, ọ bara uru ọ bụghị nanị maka GTA SA).
Ana m akwado K-Lite Codec Pack dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ịchọrọ igwu ọ bụla ọdịnaya na ihe ọ bụla ngwaọrụ. Nkọwa banyere koodu codec a na ntụziaka Otu esi etinye codecs.
https://termotools.com ig.termotools.com © Isiokwu 2019